ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်မြို့တွင် မိန့်ခွန်းပြောနေချိန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ရပ်တခု (ရုပ်သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်မြို့တွင် မိန့်ခွန်းပြောနေချိန် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်ရပ်တခု (ရုပ်သံ)
အမေစု ဘေးနားက ထဘီနားခို ကောင်တွေက လည်း အသားလွတ်လက်ရဲဇာတ်ရဲ၊ စလွယ်တက်စွတ်တဲ့ကောင်ကလည်း ကြောင်တောင်တောင်၊ အောက်ကလူတွေကလည်း ဘာမှန်းမသိ တဟေးဟေး၊ ဘပြောင်ကလည်း လှည့်ပတ်ဖြီး၊ ဝန်ကြီးတွေကလည်း စားလို့ မဝ၊ ဟုတ်နေတာပဲ။
TO..unknown December 26,2012 9:56AM, dont say like (အမေစု ဘေးနားက ထဘီနားခို ကောင်တွေက လည်း အသားလွတ်လက်ရဲဇာတ်ရဲ၊ )..That is protecting our mother Leader. you are "bay htaing bu pyaw ,idiots,fucking shit".
ထိုဖြစ်ရပ်ကိုကြည့်ပြီး အန္တာရာယ်ပြုလာနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာတောင် ဖဲကြိုးနီလေး စွတ်ပေးချင်သူရဲ့ဆန္ဒပြည့်အောင် အမေစု က လက်ခံပေးခဲ့တယ်။ စစ်ဘီလူးခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြည့်ပါလား။ တခါတည်း အရိုးတခြား အသားတခြား ဖြစ်သွားမယ်။ အရမ်းလေးစား ကြည်ညိုဖို့ကောင်းပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ပီသပါပေတယ်။
နိုင်ငံတကာစံနှင့် ယှဉ်လိုက်လျှင် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူထားတဲ့ သူတွေ တာဝန်မကျေဘူး။ အမှန်က ဖဲကြိုးလာစွပ်သူဟာ အကြမ်းဖက်သမား (ခန္ဓာကိုယ် တခုလုံး ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ မိုင်းတွေတပ်ဆင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ် ကို ဆူဆိုက် လုပ်ခဲ့မယ်)
ဆိုလျှင် ဒေါ်စု ရဲ့အရိုးတောင် ရှာတွေ့ တော့မှာ မဟုတ်ဘူး-ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်စုရှေ့ ကို ဒီလူငယ်က လုံခြုံရေးတွေ ကြားထဲက ရောက်လာရသလဲ-လုံခြုံရေးသမားတွေ အမှူမဲ့ အမှတ်မဲ့နေလို့ ပေါ့-ဘယ်နေရာမှာ မဆို လုံခြုံရေးသမားတွေ သတိ အမြဲရှိနေမယ်ဆိုလျှင် အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ရှေ့ မှာ အခုလိုမျိုးရောက်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး-
-မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယ အာဇာနည်နေ့ မဖြစ်အောင် လုံခြုံရေးသမားတွေ သတိ ရှိကြပေါ့ဗျာ-
ဒီဗီဒီယို ကြည့်လိုက် ရ တော့ ဒေါ်စု သတ္တိ ရှိတာ တွေ့ရတယ်။
လန့်သွားတာ ,မျက်နှာ ပျက်သွားတာ မ တွေ့ ရဘူး
ဒါလားကွ ဒီမိုကရေစီ Definition.....
ဒါလားကွ ဒီမိုကရေစီကိုဖေါ်ဆောင်တဲ့ ဦးစီးအဖွဲ့.....
အင်း ဒီအရပ် ဒီဇါတ် ဒီလှိုင်း ဒီလှေ ဒီအခြေအနေ
ဒီလူတွေနဲ့တော့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စကားလုံးသက်သက်
ပါပဲဆိုတဲ့ Definition သစ်တော့ထွက်တော့မယ်။
အသုံးမကျဆုံ လူဟာကိုယ့်အမည်နာမည်ကိုတောင် ထုတ်ဖော် မရေးရဲ မပြောရဲတတ်တဲ့သူပါ။
ကွန့်မန့်ရေးမယ် ဆိုရင်တောင် အမည်နာမ လေးပါ ပါစေ။
အမေသတ္တိ အမေစိတ်ဓါတ် ကိုသားတို့နားလည်ပါတယ်။
အမေ အစစ အရာရာ ဂရုစိုက်ပါနော်။
win ဆိုတဲ့ ကောင် မင်းလဲ နာမည် လိပ်စာအမှန်တိုင်း ဖော် ရေး
ငါလဲ ရေးမယ် ဟုတ်ပြီလား ခွေး
လုံခြုံရေးအရ ဒီလိုလုပ်သင့်တယ် ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သူမကို သေစေချင်နေတဲ့ လူတွေက အများကြီးရယ် ဖြူသလား မဲသလား လူဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ လုံခြုံရေးယူထားသူများရဲ့လုပ်ရပ်မှန်တယ်။ အဲဒီနေရာမှာ သိန်းစိန် ဒါမှမဟုတ် သူရရွှေမှန်း သူတို့ထဲက တယောက်ယောက်တာ ဖြစ်ကြည့်ပါလာ ပ၀ါတက်စီးတဲ့ကောင် အစအနတောင်ရှာရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တယောက်မလို့ပေါ့... သေးပေါက်ချီးပါတာတောင် လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ မပေါက်ရဲ ပမပါရဲတဲ့ စစ်အာဏာရူးတယောက်ကို ဒီလိုသွားလုပ်ကြည့်ပါလား စစ်ခွေးတွေ ၀ိုင်းကိုက်လိုက်လိမ့်မယ် အသက်တောင် ဘယ်နားကထွက်သွားမှန်း သိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။
S'Moonlit Win..son of bitch,, minn ka kaw democracy ko bal lout thi lot lei?? kway ma thar.
အမေစုဟာ အဘိုးဗိုလ်ချုပ်ဦးအောင်ဆန်းလိုအရမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ပြည်သူတွေကိုယုံကြည်တာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဦးစောလိုလူမျိးနဲ့ဆို မတွေးဝံ့စရာပါ။အထက်က aristheinwinပြောသလိုပဲ ဒုတိယအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အမေစုအတွက်လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသူများ နောက်ကိုအဲလိုမဖြစ်စေဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေစုသွားလေရာ ဘေးကင်းပါစေးးးးးးးးးးး
ဒီဖြစ်ရပ်မှာ ဒေါ်စုလူဋ္ဌကီး ပီသစွာ ၀င်ဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသတယ်။ လူပီသတယ်။
လက်နက်မရှိဘဲ လုံခြုံရေး တာဝန်ယူနေရတဲ့သူတွေ ဘ၀ဟာ မလွယ်ပါ။
ဒါသင်ခန်းစာဘဲ။ လုပ်ဋ္ဌကံမဲ့သူဟာ ရုတ်တရက် အခုလိုဝင်လာရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ပြင်ဆင်ထားဋ္ဌကပါ။ လေ့ကျင့်ထားဋ္ဌကပါ။
Democracy means civilian authority.
Hello kmoe I want you to debate with
me.Ok,If you'll be mother fucker you
cannot accept unity and diversity and
themes of debate.Ok?
မင်းကိုယ်တိုင်လဲ ဒေါ်စုကြည်သေသွားရင် ဘယ်စခန်း